Maxaad kala soctaa qodobada shirka Garoowe? - Caasimada Online
Home Warar Maxaad kala soctaa qodobada shirka Garoowe?
Maxaad kala soctaa qodobada shirka Garoowe?
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo uu shirka Garoowe noqday mid la isku mari la’ yahay islamarkaana kusoo koobmay arrinta Gobollada Dhexe iyo Hiigsiga 2016-ka, ayaa waxaa hadana soo baxaayo qodobada xasaasiga ah ee la isku hayo.
Madaxweyne Xassan waxa uu ka meer meerayaa inuu si cad u qeexo maamulka gobollada dhexe halka Puntland iyaduna ay ka dooneyso in wax waliba ay u dhacaan sida ay iyadu maagan tahay, ayada oo dooneysa in laga saaro gobolka Mudug..
Haddaba waxaan halkaani idinkugu heynaa Qodobada dhaliyay xiisada iyo kuwa shirkaasi looga hadlaayay: